စိတျထှကျပေါကျတှပေိတျနတေဲ့အခါ မနကျဖနျဆိုတာကို ခဏမလေို့ကျပါ - MM Daily Life
မနကျဖနျဆိုတာကို ခဏမလေို့ကျပါ။ သုံးစားလို့မရတဲ့ မနကေ့အကွောငျးအရာတှကေို မတှေး ပါနဲ့။သငျ့ခွတှေလေကျတှပွေနျစမျးကွညျ့ပါ အကောငျးအတိုငျးရှိနပွေီဆိုရငျ..သငျဖွဈနတေဲ့ ပွဿနာကို ပွနျလညျသုံးသပျပါ အခဈြရေး လား?
တကယျတော့အခဈြဆိုတာ မီးပါ။ ငွိမျးလိုကျရငျငွိမျးသှားပွီး မှေးထားရငျတော့ ဆကျလောငျပါတယျ။လူတဈယောကျ မှာ… အသဲတဈခါကှဲဖူးရငျ အခဈြကို ဘယျလိုကိုငျတှယျရမလဲသိသှားပါပွီ။ကိုယျ့ဒူးကိုယျတောငျ မယုံရတဲ့ခတျေမှာ သငျက ဘယျသူ့ ကိုတောငျယုံကွညျ နခေငျြသေးတာလဲ။သငျကအခဈြကွောငျ့ စိတျညဈနရေခြိနျမှာ အိပျယာပျေါမှာ နှဈပေါငျးမြားစှာ ရာဂါဝဒေနာခံစားနရေ သူကို ကွညျ့ပါ။
အဲ့လိုလူနဲ့သငျနဲ့ နရောခငျြးလဲမလား။ ဘယျလိုလဲ မလဲနိုငျဘူးမလား။နောကျတဈခု အိပျဆေးတှေ ကြှေးခံရပွီးလမျး မှာတောငျးရမျးနတေဲ့ အနာဂတျမဲ့ကြောပိုးခံထားရတဲ့ ကလေးငယျနဲ့ သငျနရောခငျြးလဲမလား ဘယျလိုလဲ မလဲနိုငျဘူးမ လား။အမှိုကျပုံ ထဲကအမှိုကျတှခေညျြးကောကျစားနေ ရတဲ့ လူတှနေဲ့နရောခငျြးခြိနျးမလား။ဘယျလိုလဲ?
သိပျမငွီးတှားပါနဲ့ အခဈြငတျတာ ထမငျးငတျတာ လောကျမဆိုးဝါးပါဘူး။စီးပှားရေးကွောငျ့ စိတျညဈနသေလား?စိတျမညဈပါနဲ့။ ဘယျနှဈခါလဲကသြှားလဲ အရေးမကွီးပါဘူး ဘယျလောကျ မွနျမွနျ ပွနျထနိုငျတာပဲ အရေးကွီးတာပါ။သငျ့မှာ ခွတှေလေကျတှေ အကောငျးကွီးရှိနတေယျမလား။ မိတျဆှအေပေါငျးအ သငျးတှရှေိနတေယျစိတျကောငျးတဈခုရှိနသေေး တယျဆိုရငျ သငျပွနျထနိုငျမှာပါ။
အကွှေးတှမြေားလို့ စိတျညဈနသေလား။ အကွှေးကငျးတဲ့သူဆိုတာ မရှိသလောကျရှားပါတယျ။ အလုပျလုပျနသေမြှတော့ အကွှေးမကငျးကွပါဘူး။သားရေးသမီးရေးအတှကျ စိတျပူနသေလား?သငျ့မှာ လိမ်မာ ကောငျးမှနျတဲ့သားသမီးတှေ ရှိနရေငျအမှပေေးဖို့ လိုအပျလို့လား။ဆိုးသှမျးတဲ့သား သမီးရှိလို့ အမှပေေးရငျရော.. သူတို့တှေ သုံးဖွုနျးရငျကုနျမှာမို့ အမှပေေးဖို့လိုသလား။
ကြှနျမတို့မိဘတှလေကျထကျ သားသမီး ၇ယောကျ ၈ယောကျ ၉ယောကျ ၁၀ယောကျ မှေးဖူးသူတှေ ပွနျကွညျ့ပါလား။အခုခတျေ ကလေး၂ ယောကျ ၃ယောကျ မှေးထားရုံနဲ့ပူစရာလား။ အိမျထောငျရေးအဆငျမပွလေို့ စိတျညဈနလေား။တဈယောကျတညျးလာပွီး တဈယောကျတညျး သရှောပွနျ ကွရမယျ့ ဘဝမှာ တဈစုံတဈယောကျကွောငျ့ ဘဝတိုတိုလေးမှာ စိတျဆငျးရဲနတော တနျပါ့မလား။
စိတျညဈတယျဆိုတာ. တဈခုခုကို ဆုပျကိုငျထားလို့ပါ။ လိုခငျြဖွဈခငျြတာတှေ မြားနလေို့ပါ။ အလုပျကို အတတျနိုငျဆုံး လုပျသငျ့တာလုပျပွီး ဘဝကို နပြေျောဖို့ပဲအရေးကွီးတာပါ။တဈစုံတဈရာကို အလှနျအမငျးတှယျတာ ဆုပျကိုငျတာမြိုးကိုမလုပျပါနဲ့ ။ အရာအားလုံးဖွဈခြိနျတနျဖွဈပွီး ပကျြခြိနျတနျပကျြပါတယျ။ကံ ကံရဲ့အကြိုးကိုယုံကွညျမှ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျစဈစဈပါ။ ဘာအတှကျ ဘယျသူ့အတှကျမှ စိတျမညဈနဲ့။
ယနလေု့ပျစရာရှိတာ သာအကောငျး ဆုံးလုပျ.သငျတကယျစိတျညဈ ရမှာက ဘဝကို ဒါန သီလ ဘာဝနာမပါဘဲကုနျဆုံးသှားမှာကိုပဲ.သငျ့နှာသီးဝကိုအောကျဆီဂငျြ ဝငျနသေမြှ ကံကောငျးနတေဲ့လူလို့မှတျ ဒါဟာဘဝပဲ။
မနက်ဖန်ဆိုတာကို ခဏမေ့လိုက်ပါ။ သုံးစားလို့မရတဲ့ မနေ့ကအကြောင်းအရာတွေကို မတွေး ပါနဲ့။သင့်ခြေတွေလက်တွေပြန်စမ်းကြည့်ပါ အကောင်းအတိုင်းရှိနေပြီဆိုရင်..သင်ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ အချစ်ရေး လား?
တကယ်တော့အချစ်ဆိုတာ မီးပါ။ ငြိမ်းလိုက်ရင်ငြိမ်းသွားပြီး မွေးထားရင်တော့ ဆက်လောင်ပါတယ်။လူတစ်ယောက် မှာ… အသဲတစ်ခါကွဲဖူးရင် အချစ်ကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲသိသွားပါပြီ။ကိုယ့်ဒူးကိုယ်တောင် မယုံရတဲ့ခေတ်မှာ သင်က ဘယ်သူ့ ကိုတောင်ယုံကြည် နေချင်သေးတာလဲ။သင်ကအချစ်ကြောင့် စိတ်ညစ်နေရချိန်မှာ အိပ်ယာပေါ်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရာဂါဝေဒနာခံစားနေရ သူကို ကြည့်ပါ။
အဲ့လိုလူနဲ့သင်နဲ့ နေရာချင်းလဲမလား။ ဘယ်လိုလဲ မလဲနိုင်ဘူးမလား။နောက်တစ်ခု အိပ်ဆေးတွေ ကျွေးခံရပြီးလမ်း မှာတောင်းရမ်းနေတဲ့ အနာဂတ်မဲ့ကျောပိုးခံထားရတဲ့ ကလေးငယ်နဲ့ သင်နေရာချင်းလဲမလား ဘယ်လိုလဲ မလဲနိုင်ဘူးမ လား။အမှိုက်ပုံ ထဲကအမှိုက်တွေချည်းကောက်စားနေ ရတဲ့ လူတွေနဲ့နေရာချင်းချိန်းမလား။ဘယ်လိုလဲ?
သိပ်မငြီးတွားပါနဲ့ အချစ်ငတ်တာ ထမင်းငတ်တာ လောက်မဆိုးဝါးပါဘူး။စီးပွားရေးကြောင့် စိတ်ညစ်နေသလား?စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ ဘယ်နှစ်ခါလဲကျသွားလဲ အရေးမကြီးပါဘူး ဘယ်လောက် မြန်မြန် ပြန်ထနိုင်တာပဲ အရေးကြီးတာပါ။သင့်မှာ ခြေတွေလက်တွေ အကောင်းကြီးရှိနေတယ်မလား။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအ သင်းတွေရှိနေတယ်စိတ်ကောင်းတစ်ခုရှိနေသေး တယ်ဆိုရင် သင်ပြန်ထနိုင်မှာပါ။
အကြွေးတွေများလို့ စိတ်ညစ်နေသလား။ အကြွေးကင်းတဲ့သူဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။ အလုပ်လုပ်နေသမျှတော့ အကြွေးမကင်းကြပါဘူး။သားရေးသမီးရေးအတွက် စိတ်ပူနေသလား?သင့်မှာ လိမ္မာ ကောင်းမွန်တဲ့သားသမီးတွေ ရှိနေရင်အမွေပေးဖို့ လိုအပ်လို့လား။ဆိုးသွမ်းတဲ့သား သမီးရှိလို့ အမွေပေးရင်ရော.. သူတို့တွေ သုံးဖြုန်းရင်ကုန်မှာမို့ အမွေပေးဖို့လိုသလား။
ကျွန်မတို့မိဘတွေလက်ထက် သားသမီး ၇ယောက် ၈ယောက် ၉ယောက် ၁၀ယောက် မွေးဖူးသူတွေ ပြန်ကြည့်ပါလား။အခုခေတ် ကလေး၂ ယောက် ၃ယောက် မွေးထားရုံနဲ့ပူစရာလား။ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေလို့ စိတ်ညစ်နေလား။တစ်ယောက်တည်းလာပြီး တစ်ယောက်တည်း သေရွာပြန် ကြရမယ့် ဘဝမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကြောင့် ဘဝတိုတိုလေးမှာ စိတ်ဆင်းရဲနေတာ တန်ပါ့မလား။
စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာ. တစ်ခုခုကို ဆုပ်ကိုင်ထားလို့ပါ။ လိုချင်ဖြစ်ချင်တာတွေ များနေလို့ပါ။ အလုပ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်သင့်တာလုပ်ပြီး ဘဝကို နေပျော်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာပါ။တစ်စုံတစ်ရာကို အလွန်အမင်းတွယ်တာ ဆုပ်ကိုင်တာမျိုးကိုမလုပ်ပါနဲ့ ။ အရာအားလုံးဖြစ်ချိန်တန်ဖြစ်ပြီး ပျက်ချိန်တန်ပျက်ပါတယ်။ကံ ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်ပါ။ ဘာအတွက် ဘယ်သူ့အတွက်မှ စိတ်မညစ်နဲ့။
ယနေ့လုပ်စရာရှိတာ သာအကောင်း ဆုံးလုပ်.သင်တကယ်စိတ်ညစ် ရမှာက ဘဝကို ဒါန သီလ ဘာဝနာမပါဘဲကုန်ဆုံးသွားမှာကိုပဲ.သင့်နှာသီးဝကိုအောက်ဆီဂျင် ဝင်နေသမျှ ကံကောင်းနေတဲ့လူလို့မှတ် ဒါဟာဘဝပဲ။
မိဘတိုငြးသိထားသင့တြဲ့ ကလေးတှရေဲ့ဘဝမှာ အရေးပါအဆုံးကာလ (၈)ခု